हिमाल खबरपत्रिका | नेपाल–भोट सम्बन्धमा गडबडी
नेपाल–भोट सम्बन्धमा गडबडी
सातौं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा भोटले राष्ट्रको रूप लिंदै गर्दा नेपालमा अंशुवर्माको शासन थियो। लोकप्रिय शासक अंशुवर्माको अवसानपछि राजसिंहासनमा बसेका उदयदेवलाई संवत् ६७८ मा निष्कासन गरेर धु्रवदेवलाई राजाको थान्कोमा राखेका गुप्तवंशी विष्णुगुप्तले उपराजको अधिकार लिए। उदयदेव सपरिवार भोटको शरणमा गए।
अंशुवर्माकै पालामा नेपाल–भोट आवतजावत र बन्दबेपार चल्न थालेको थियो। त्यसवेला भोटका राजा स्रोङचन गम्पो नाबालकै थिए। शरणार्थी राजा उदयदेवको सम्बन्धबाट राजकुमारी भृकुटीसँग स्रोङचन गम्पोको बिहे भयो र नेपाल–भोट घनिष्ठता बढ्यो। भृकुटीको माध्यमबाट भएको बौद्धधर्म प्रतिष्ठाले भोटमा राष्ट्रिय रूप लियो।
त्यो वेला भोटबाट घोडा, सुन, नुन, ऊन र ऊनबाट बनेका सामान नेपाल आयात हुन्थ्यो। यताबाट खाद्यान्न, भाँडावर्तन, लत्ताकपडा र मरमसला जान्थे। त्यो बेपार दिनप्रतिदिन बढ्दै आयो। मल्लकालमा भीम मल्लले भोट बेपारमा नेपालको एकाधिकार कायम गरी बत्तीस कोठीको व्यवस्था गरे। त्यसमा धेरै नेवारहरूकै कोठी थिए। बत्तीस कोठीका महाजनले अन्तःशुल्क तिर्नुपर्दैनथ्यो। सीमा बेपारको भन्सार नेपालकै हुन्थ्यो, भोटमा चल्ने पैसा पनि नेपालकै टक्सारमा ढालेर पठाइन्थे।
पछि युद्ध खर्च धान्न मल्ल राजाहरूले तामा मिसिएका खोटा टक भोट पठाए, जसका कारण सम्बन्धमा खटपट आयो र दुईपल्ट युद्ध भयो। दोस्रो युद्धमा त नेपालले भोटको मद्दतमा आएको चिनियाँ सेनासँग पनि भिड्नुपर्‍यो। लडाईंमा हारपछिको सम्झौतामा भोटका लागि चीनले टक ढालिदिने भयो। नेपाल–भोट बेपार भने पूर्ववत् चलिरह्यो। पछि जंगबहादुरको पालामा यस्तै बेपार र सीमा विवाद उठेर युद्ध भयो। लडाईंमा नेपालको जितपछि भोटले सालना दश हजार कर तिर्नुपर्ने सम्झौता भयो।
इष्ट इण्डिया कम्पनी धेरै पहिलेदेखि भोट बेपारमा हात हाल्न प्रयासरत थियो। पृथ्वीनारायणको पालामा बोगले भन्ने कम्पनीका प्रतिनिधि नेपालबाट जान नपाउँदा भोटाङतिरबाट भोट पुगेछन्, तर भोटको असहयोगले उद्देश्यमा सफलता मिलेन। त्यसअघि कम्पनीका मुरक्राफ्ट र हियर्सीको दल जोगीको भेषमा कुमाउतिरबाट भोट पसेको थियो। उनीहरू जाँदा नेपालले घुमन्ते जोगी भनेर वास्ता गरेन। फर्केर आउँदा भने पक्राउ परेछन्। नेल हालेर राखिएका उनीहरू बल्लबल्ल छुटेर गए।
यसरी नेपालबाट भोटको बेपार गर्न नपाएर छटपटिरहेका अंग्रेजहरूले वीरशमशेरलाई काठमाडौंको सत्तामा स्थानापन्न गराएपछि गोर्खा रेजिमेन्टमा रिक्रुट भर्ना सम्झौता गराए। पछि चन्द्रशमशेरको सहमतिमा अंग्रेजले चीनसँग भोट बेपार सम्झौता गरे, तर भोटले मान्दै मानेन। वायसराय कर्जनले सुखीमको नाथुलाबाट पठाएको यङ्गहज वेन्डको दललाई पनि भोटले खामाजोगमै रोक्यो। त्यसपछि सैनिक अभियान नै चलाउने स्थितिमा पुगेका कर्जनले नेपालसँग सहयोग मागे। तर, भोटसँग अघि भएको सन्धि अनुसार नेपालले अंग्रेजलाई सहयोग गर्न सक्दैनथ्यो। त्यो अवस्थामा नेपालको बेपार चौपट हुन्थ्यो। तर, अंग्रेजको वचन हार्ने अवस्थामा नरहेका चन्द्रशमशेरले केही नगद र भारी बोक्ने भरिया, चौंरी पठाइदिने वचन दिए।
भोटको गतिविधि बुझन नेपालस्थित अंग्रेज रेजिडेन्टलाई अह्राइयो। रेजिडेन्टलाई कहिले स्वयं चन्द्रशमशेर उपस्थित भएर त कहिले कर्णेल कप्तान रेजिडेन्सी गएर भोटको दैनिकी खबर सुनाउँथे। भोट अभियानमा जान कताबाट सहज हुन्छ, कति माइल, कति बास पर्छ, भोटेहरू के कसो गरिरहेछन् आदि विवरण दिइएको रोजनाम्चा (दैनिकी–डायरी) बाट त्यो वेलाको धेरै कुरा थाहा हुन्छ।
दि डिष्टेन्स फ्रम काठमाण्डु टु इलाम इज् २०४ माइल्स. २६ डे जर्नी फर ए मेन् विथ ए स्मल वर्डन् इन् दि विन्टर सेजन एवाउट् ४५ डे जर्नी इन् दि ऐन सेजन् मनि रिवर्स एण्ड टेबुटेल ट पास एण्ड नो ब्रिज् एक्रस् दियर इज् नो रोड टु इलाम वन्ली फुट पाथ ओवर हिल एण्ड् ... दि डिस्नेन्स फ्रम् रे. स्टेसन् टु इलाम इज् २५ माइलस्